Maiduguri oo bandow lagu soo rogay - BBC Somali
Maiduguri oo bandow lagu soo rogay
Image caption Ciidamada Nigeria
Milatariga Nigeria, ayaa waxay ku soo rogeen bandow magaalada weyn ee waqooyi bari ku taalla ee Maiduguri, halkaas oo weerar aan la filanayn ay ku qaadeen kooxda Boko Xaram.
Waxaa cidla ah wadooyinka, waxaana la xiray suuqyada, Iskuulada iyo Isbitaalada ku yaalla meelaha ay dadka u badan yihiin, sida wararka ay sheegayaan.
Ciidamada ayaa sheegay in bandowga la amray, si loo badbaadiyo nolosha iyo hantida dadka.
Ciidamada iyo kooxaha illaalada ayaa la dagaalamay Boko Xaram, habeenkii talaadada, iyaga oo isku dayaya in ay galaan Maiduguri, sida ay sheegayaan dadka dagan halkaasi.
Weerarkan ayaa ah kii ugu darnaa oo ay isku dayaan kooxda si ay ugalaan magaalada, tan iyo markii milatariga ay ku dhawaaqeen in ay dib uga qabsadeen magaalooyinka kooxda Boko Xaram, waxaa sidaa u sheegay BBC qof taxliiliya arrimaha dalkaasi oo ku sugan Nigeria.
Lahaanshaha sawirka Boko Haram Twitter
Image caption Dagaalyahanada Boko Xaram
Boko Xaram ayaa lala xiriiriyaa kooxda isugu yeertay Khilaafada Islaamka.
Maiduguri, ayaa ah magaalo ay ku noolyinhiin 2-million oo qof, waxa ayna horay u ahayd xarunta kooxda.
Hoggaamiyaha taageerayaasha milatariga Yusuf Sani, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP, in 6 ka mid ah raggiisa la dilay halka 12 kalana la dhaawacay, kaddib markii haween isa soo miidaamiyay ay is qarxiyeen.